ဒါကြောင့်သင်ကနောက်ဆုံးတော့ပြုပါတယ်. သင်ထည့်ပြီးပြီ မင်းရဲ့အားလပ်ရက်အတွက် အလုပ်မှာ, မင်းရဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ ၀ ယ်ခဲ့တယ်, ထိုက်တန်တဲ့အားလပ်ရက်အတွက်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံကိုခရီးဆက်ခဲ့တယ်. ထိုရှိသမျှကောင်းနှင့်ကောင်းပါတယ်စဉ် – နောက်ဆုံးတော့, ဘူဒါပက်လှပသောမြို့ဖြစ်၏ – သာမြို့တော်တဝိုက်ကပ်နေဖြင့်ရေတိုကိုယ့်ကိုကိုယ်မရောင်းကြဘူး. ဥရောပရထားခရီးသွားဘို့အတွက်ရွေးချယ်စရာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှင့်အတူတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်တိုက်ကြီးဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဤဟန်ဂေရီပါဝင်သည်. ဒါကြောင့်သင်မြင်ရပါတယ်တခါ Szechenyi Thermal ရေချိုးခန်း နှင့်ဘီယာ Spa မှာပိုင့်ခံစား, ထိုတိရစ္ဆာန်တကောင်မျှပေါ်မြို့ထွက်ဦး3ရထားအကောင်းဆုံးဘူဒါပက်နေ့ကခရီးစဉ်.
သင်၏ပရိတ်သတ်ဆိုရင် အပူဗတ်, Debrecen သင်တို့ကိုလည်းဖုံးလွှမ်းထားသည်. အစဉ်အလာကနေထွက်ခွာခုနှစ်တွင်, Aquaticum Spa သည် indoor တစ်ခုနှင့်ပိုတူသည် ရေကိုပန်းခြံ. မြင့်မားသောအမိုးခုံးမျက်နှာကျက်နှင့်ရောင်စုံရေဆလိုက် featuring, ဤအပူရေချိုးများသည်တစ်မိသားစုလုံးအတွက်ပျော်စရာဖြစ်သည်.
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတစ်အချက်အချာအဖြစ်လူသိများ, ၎င်းသည်တိုးတက်သောကော်ဖီရှုခင်းကိုကြည့်ပြီး၎င်း၏ကွေ့ကောက်သောလမ်းများတစ်လျှောက်ရာနှင့်ချီသောကဖေးများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်. ဗီယင်နာလည်း Schonbrunn မှနေရာဖြစ်သည်, Hapsburgs ၏နွေရာသီနေထိုင်မှုနှင့်တမြို့လုံးရှိခမ်းနားထည်ဝါသောအဆောက်အအုံများစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်.
နောက်ဆုံး, ကျွန်တော်တို့ဟာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံး entry ကိုမှလာ, တောင်ဘက်ဗီယင်နာ၏တည်ရှိသောလယ်ပိုင်းအရွယ်မြို့. ဟုတ်ကဲ့, ဒါအမှန်ပဲ, ကြှနျုပျတို့သညျဤစာရင်းသည်အခြားသြစတြီးယားနေ့ကခရီးစဉ်ကိုကဆက်ပြောသည်င့်. အဘယ်ကြောင့်ရဲ့ကြောင်း? ကောင်းပြီ Wiener Neustadt ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (ဘေးဖယ်နေတဲ့ရယ်စရာနာမကိုအမှီရှိခြင်းကနေ), နီးပါးတစ်စည်ကားမြို့ဖြစ်၏ 50,000 လူထု, ပြီးတော့လုပ်စရာကိစ္စတွေအားလုံးမှာအဲဒါရှိတယ်.
ဗီယင်နာမြို့မှကီလိုမီတာ ၃၀ အကွာတွင်ရှိပြီးဟန်ဂေရီ-သြစတြီးယားနယ်စပ်နှင့်အလွန်နီးသည်။, ဒီမြို့ရဲ့သမိုင်းအမျိုးမျိုးသောအင်ပါယာကနေထိန်းချုပ်ဘို့တိုက်ပွဲများနှင့်အတူထူပြောနေတယ်ဖြစ်ပါသည်. ဤအတိုက်ပွဲများနေသော်လည်း- သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထဲက – Wiener Neustadt သည် ၁၇၀၀ ခုနှစ်များက Maria Theresa စစ်တက္ကသိုလ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်အရေးပါသောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးကွင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။.
အတိတ်နောက်ကွယ်မှထွက်ခွာ, ယနေ့ Wiener Neustadt အများအပြားအမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများမှနေရာဖြစ်သည်, ပြင်ပတောင်တက်နှင့်ပန်းခြံများအများအပြားအပါအဝင်. သငျသညျအခြို့သောအလွတောင်တက်အဘို့အ Myra ရေတံခွန်သို့သွားရောက်နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ဦးခေါင်း Gesaeuse မှ အမျိုးသားဥယျာဉ် လေကောင်းလေသန့်ရရန်.
အဆိုပါမြို့မှာလည်းအများအပြားအထိမ်းအမှတရှိပါတယ်, ပြတိုက်, နှင့်ပြခန်းမြို့တော်ရဲ့သမိုင်းသရုပ်ဖော်ထံအပ်နှံ. ဒီအားလုံးအသံသင်တို့အဘို့သိပ်ကြိုက်ခဲ့လျှင် – မစိုးရိမ်ပါ. လှုပ်ရှားမှုများအပြည့်အဝနေ့ကဆင်းအအေးအခွင့်အလမ်းများအတွက် Linsberg အာရှ Therme Spa မှခေါင်းပြီးနောက် (သို့မဟုတ်သွေးပူ!) နှင့်အပန်းဖြေ.
ယေဘုယျအားဖြင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့အဟောင်းအဆောက်အဦးများအပြည့်အဝ, တစ်ဦး ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားသောအလယ်ခေတ်စတုရန်း, နှင့်ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး operating Astronomical နာရီ, ပရာ့ဂ်သင့်ရဲ့ဥရောပအားလပ်ရက်အပေါ်တစ်ဦး-do မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်. ဤနေရာတွင်နှေးကွေးယူနှင့်ချားလ်စ်တံတားဖြတ်ပြီး strolling ပျော်မွေ့, ခုနှစ်တွင်ပြီးစီး 1402. သို့မဟုတ်ပင်ပိုကောင်း, မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးသောတော်ဝင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးရဲတိုက်ဟောင်းရဲ့ရှေးဟောင်းအပျက်အယွင်းတွေကိုစစ်ဆေးဖို့နေ့အတွက် Vysehrad ကိုသွားပါ။.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “3 အကောင်းဆုံးဘူဒါပက်နေ့ရထားဖြင့် Trips” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-budapest-day-trips-train/?lang=my ့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#နေခြည် #traveleurope ဘူဒါပက် Daytrips ရထားခရီးသွား ဟိုတယ် ပုဂံ TravelVienna